Sedatives & Hypnotics (အိပ်ဆေးများ) | Page3| Dr Myanmar | Myanmar Medical Website
တွဲဖက်မသောက်သုံး သင့်သောအစား အသောက်နှင့်ဆေးဝါးများ
အိပ်ဆေးရဲ့ အာနိသင်မြန်မြန်ရဖို့အတွက် အစာနဲ့ဝေေးဝေး သောက်ပေးရပါမယ်။
အရက်ကို ရှောင်ကြဉ်ထားရပါမယ်။ မရှောင်ရင် ဆေးကြောင့်ဖြစ်တဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေ ပိုပြင်းထန်လာနိုင်ပါတယ်။
၂၁.၉.၂၀၁၅ | တွဲဖက်မသောက်သုံး သင့်သောအစား အသောက်နှင့်ဆေးဝါးများ
ဥပမာ 1. Alendronate sodium
2. Alendronate Sodium + Cholecalciferol
3. Ibandronate Sodium
4. Risedronate Sodium
5. Risedronate Sodium + Calcium Carbonate...
Antimycobacterials (TB ရောဂါကုဆေး)
ဥပမာ 1. Ethambutol
4. Rifampin + Isoniazid
5. Rifampin + Isoniazid + Pyrazinamide
ဒီဆေးတွေက Mycobacteria (တုတ်တံပ...
Sedatives &amp; Hypnotics (အိပ်ဆေးများ)